NYI LYNN SECK 18+ DEN: Diary 28 August
ဒီနေ့ ထီတစ်စောင် ထိုးထားတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း လူဆိုတာ မျှောလင့်ချက်လေးနဲ့မှ နေသာထိုင်သာ ရှိတာဆိုတော့ ကျွန်တှော ထီထိုးလိုက်တယ်။ သိပ်များများ စားစား ရည်မှန်းချက် တော့မရှိပါဘူး။ ပထမဆုဖြစ်ဖို့လည်း မလိုအပ်ပါဘူး။ ကျွန်တှောဘာလုပ်မယ်လို့ ခင်ဗျားတို့ထင်သလဲ။
ကျွန်တှော မြန်မာပြည် ပြန်မယ်။
ခင်ဗျားတို့အဖို့တော့ ရယ်စရာစေားကောင်းနေလိမ့်မယ်လို့တော့ ထင်မိသား။
ဒီလိုပေါ့ဗျာ။ လူတကိုယ် စိတ်တမျိုးပေါ့။
ထီမပေါက်ရင်တော့ ကံမကောင်းစွာပဲ နိုင်ငံခြားမှာ ဆက်နေရဦးမှာပေါ့ဗျာ။
Diary , Idea
Posted by NLS at 8/28/2005 09:00:00 PM
3 Responses to “Diary 28 August”
phyo nge said...
August 30, 2005 at 2:14 AM
hey! hte pauk yin phyo nge par myanmar ko alare lite khat mal.(haha)
September 8, 2005 at 11:33 AM
havent won any prize
pyan ma lar nah kwar;
Di ka kaung ma lay twe ah twet so yane ya tal.
Ta Yoke Gyi